Ungakhohlwa kanjani ukuthi ubani omthandayo ▷ ➡️ Zitholele Ku-inthanethi ▷ ➡️
Ungakhohlwa kanjani ukuthi ubani omthandayo. Sonke sike saba sothandweni esikhathini esithile ekuphileni kwethu. Izigigaba, ukuhleka, ukudla kwakusihlwa, intukuthelo, ... Ukuphila izikhathi ezikhethekile nomunye umuntu futhi ungafuni ukuthi kungapheli, kodwa ngeshwa lokhu akunjalo ngaso sonke isikhathi.
Nakuba kungaba kuhle ukuthola umuntu ophelele impilo yonke, akufinyelelwa ngaso sonke isikhathi. Ningase ningabi nemigomo efanayo noma izimpilo zenu kufanele zivele zihlukaniswe. Yilapho kufika inkinga enkulu, ungakhohlwa kanjani ukuthi ubani omthandayo?
Kulesi sihloko sizonikeza uchungechunge lwamathiphu ukuze ngikusize ukhohlwe uthando lwakudala nokuthi ungaqhubeka, uyalokotha ukuyifunda?
1 Ungakhohlwa kanjani ukuthi ubani omthandayo step by step
1.1 1. Nciphisa ukuxhumana
1.2 2. Akunakugwenywa ukucabanga ngomunye umuntu
1.3 3. Cabanga ngawe
1.4 4. Khuluma nomuntu omethembayo
1.5 5. Thola ugqozi abantu abaye bawunqoba
1.6 6. Bekezela ubuhlungu
1.7 7. Gxila esikhathini samanje
1.8 8. Khumbula amaphutha e-ex yakho
1.9 9. Faka imali kulokho okuthandayo
1.10 10. Ungazibeki icala
1.11 11. Yenza iziphonso ukuze ukhohlwe ukuthi ubani omthandayo
1.12 12. Umkhuleko
Ungakhohlwa kanjani ukuthi ubani omthandayo step by step
Ngokulandelayo sizokunikeza Amathiphu we-12 ukuze ufeze futhi ukwazi ukufeza umgomo wakho wokukhohlwa ukuthi ubani omthandayo futhi uqhubeke nempilo yakho.
1. Nciphisa ukuxhumana
Iseluleko sokuqala esikunikeza sona sokuthi ungakhohlwa kanjani ukuthi ubani omthandayo ukunqamula ukuxhumana no-ex . Kungakhathaliseki ukuthi ukhuluma mathupha, ezinkundleni zokuxhumana, noma ngocingo, ukuhlala uthintana ngemva kokuhlukana kuzovula amanxeba futhi. Abantu abaningi bakushaya indiva lesi sinyathelo futhi bangase babuyele ekuguleni, babeke eceleni ukuphulukiswa kwabo ngokomzwelo ukuze bawine ukubuyisela i-ex yabo.
Uma ungeke ukwazi ukunqamula ukuxhumana, ngeke ulukhohlwe lolu thando, noma ngabe ubuhlobo bebubuhlungu. Futhi, kufanele lahla izinto nezipho ukuthi akunike khona ukuze ugweme ukucabanga ngaye.
2. Akunakugwenywa ukucabanga ngomunye umuntu
Nakuba kuzwakala kudida, Uma uzama ukungacabangi ngomunye umuntu, uzomcabanga kakhulu. Ngokusho kwezazi zokusebenza kwengqondo, lapho sizama ukukhohlwa nge-ex, sithola umphumela ophambene. Sigxila ekucabangeni kwethu ekungayikhumbuli, ngakho-ke usuvele ucabanga ngalowo muntu.
Ungakuphoqi, akunakugwemeka ukuthi ngezinye izikhathi lezo zikhathi owawuphila kuzo zifike engqondweni yakho. Kalula nje ungapheli amandla ngayo futhi uqhubeke.
3. Cabanga ngawe
Ocwaningweni lokuqonda ukuthi ungakhohlwa kanjani ukuthi ubani omthandayo, ungahlakulela imilutha ngenxa yengcindezi, ukukhathala nokukhathazeka. Ukubhekana nazo zonke lezi Imiphumela emibi kufanele uphumule futhi uphumule. Kufanele wazi ukuthi yiziphi izidingo zakho ngalesi sikhathi futhi uzihlanganise. Zitotose, ugqoke futhi uzame ukungacwili kwisizungu sakho, eukuphela kobudlelwano kuwushintsho olubalulekile okufanele lwenziwe ngempilo nesineke .
4. Khuluma nomuntu omethembayo
Ukuzikhulula ngomngane omethembayo kungakwenza siza umuntu anqobe ukungazethembi kwakhe. Ukukhuluma kusiza izinhliziyo zethu, ukuba zidedele konke esikuthwele ngaphakathi futhi kusize ukuqonda izingxabano nezinkathazo esiphila kuzo. Zama ukuqonda imizwa yakho kanjalo bheka isimo ngelinye iso.
5. Thola ugqozi abantu abaye bawunqoba
Ukuqeda ukuhlukana akulula, futhi cishe uzoba nenkinga yokukwenza. Indlela enhle yokubona ukuthi lokhu kuhlukana kunganqotshwa sigqugquzelwe abantu esibathandayo nabake badlula ezimeni ezifanayo. Ngale ndlela, singashukunyiswa ukuqonda indlela abaye bakunqoba ngayo ukwehlukana.
Ungathola lezi zithenjwa ku:
Amawebhusayithi namabhulogi: Kuneziteshi ezidalelwe ngokukhethekile ababhalisile ukuze bafunde ubudlelwano obunempilo, okuhlanganisa nokunqanyulwa kwabo.
Amavidiyo noma okushicilelwe kumanethiwekhi: Njengoba siyindlela yokuxhumana esheshayo, sizohlala sinezeluleko ezithile ezivela kothile zokuthi ungakhohlwa kanjani ngomuntu.
Amathiphu avela kubangani: Uma umngane oseduze eke wabhekana nesimo esifanayo, zama ukukhuluma naye futhi ukhuthazeke ngoshintsho alwenzile.
6. Bekezela ubuhlungu
Yize kubonakala kungenakwenzeka, Uzodlula ebuhlungwini obuzwa ngokuhlukana. Lokhu kudinga ukuthi uhloniphe ubuhlungu bakho futhi uphile le nqubo yokuhlukanisa ngokuzolile. Njengoba uzama ukuqeda ubuhlungu bokuhlukana nomuntu omthandayo, yenza izinto ezijabulisayo futhi ufune ukusekelwa abangane bakho abaseduze.
Futhi, ungazifanisi nomuntu okwazile ukuqeda ukuhlukana ngokushesha. Nikeza ingqondo yakho isikhathi sokucubungula lokhu kwehlukana ngendlela evuthiwe futhi enesibopho.
7. Gxila esikhathini samanje
Ithiphu yesikhombisa yokuthi ungakhohlwa kanjani ukuthi ubani omthandayo ningalicabangeli ikusasa ndawonye noma ubambelele kokudlule. Iphutha elivamile ukucabanga izinto ezingokoqobo ezingeke zenzeke esikhundleni sokugxila esikhathini samanje nokuvuthwa kwakho. Ngaphezu kwalokho, kuyadingeka ukuqonda izizathu zokuthi kungani nahlukana, ukuhlaziya nokukhumbula ukuthi isimo sasingesihle futhi akekho phakathi kwenu owayelungile.
8. Khumbula amaphutha e-ex yakho
Uma sihlukana nomuntu sinomkhuba wokukhumbula okuhle kuphela, kodwa khumbula ukuthi uma ukushiyile, kungenxa yokuthi bekungemnandi kakhulu. Zama uku cabanga ngamaphutha nezimo zabo zengqondo ezingezinhle ukuze ugweme ukuphindela emuva noma ucabange ubudlelwano obuphelele. Konke lokhu akusho ukuthi kufanele ukuzonde, ukude nakho, kodwa akusho ukuthi unakho e-altare.
9. Faka imali kulokho okuthandayo
Inqobo nje uma inhliziyo yakho ilulama, ungakwazi gcina ingqondo yakho igxile emisebenzini oyithandayo. Ungabuyela emisebenzini yakudala oyithandile noma uthole emisha ekulethela injabulo. Ngaphezu komuzwa wokufeza okuthile, ngale ndlela uzoqala ukuba nemikhuba kanye nezinto zokuzilibazisa lowo owakwakho angeke ahileleke kukho.
10. Ungazibeki icala
Iphutha elivamile ukucabanga ukuthi ukuhlukana kuyiphutha lakho kuphela. Ungazizwa unecala Ngokucabanga ukuthi awukafiki kulo msebenzi, singabantu abanamaphutha emvelo kanye nezifiso, ngakho-ke, sithambekele ekwenzeni amaphutha. Futhi, ukungezwani ebudlelwaneni kungaxosha abantu.
Ngakho khumbula lokho nobabili ninqume ukwenza lesi sinqumo nokuthi, nakuba kubuhlungu, esikhathini esizayo uzobona ukuthi kube yinto engcono kakhulu ongayenza.
11. Yenza iziphonso ukuze ukhohlwe ukuthi ubani omthandayo
Emzamweni wokuqeda ukuhlukana, abanye abantu basebenzisa iziphonso ukuze bakhohlwe ngomuntu. Okulandelayo, sizokunikeza isibonelo ongasenza:
Bhala igama eliphelele lomuntu ofuna ukumkhohlwa ephepheni elimhlophe.
Phonsa iphepha emanzini bese uphinda umusho olandelayo kathathu: “Emajikeni alo mfula, imfucumfucu iyama. Wena wawunjengogodo empilweni yami. Emzileni wokuphila, manje usudlulile.
Ukwenza lo mkhuba kufanele ube nokholo lokuthi uzosebenza. Kuyi-a ukuzivocavoca kwengqondo okukusiza ukuthi ukhohlwe yilo muntu, ngaphezu kwesipelingi futhi inenani elingokomfanekiso lokunqoba nokukhohlwa.
Ngaphezu kweziphonso, abantu abaningi baphendukela emthandazweni ukuze bakhohlwe lolo thando olulahlekile. Ngamafuphi, kungenye indlela yokusebenzisa ingqondo ukususa uthando lwangaphambili empilweni yakho. Ngamanye amazwi, kuwukuzindla ukususa ubuhlungu obuzwayo ngenkathi ubhekene nemizwa kanye nempilo yansuku zonke.
Nakuba kungase kube nzima, ukuthola ukuthi ungakhohlwa kanjani ukuthi ubani omthandayo kuyoba yinzuzo kuwe. Manje yisikhathi sokuxhumana nathi futhi silalele izifiso zethu. Ngomqondo ocacile siyakwazi ukuzeluleka futhi sivuthwe njengabantu.
Sithemba lesi sihloko kusuka thola.online ikusize futhi, uma ukulesi simo, khumbula ukuthi lokhu kuhlupheka kuzophela. Izinsuku ezimbalwa zokuqala ngemva kokuhlukana cishe kuyoba nzima, kodwa maduzane uzothola okudingayo ukuze uthole umuntu.